Xoghayaha Guud ee UNWTO wuxuu la kulmay Madaxweynaha Azerbaijan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Xoghayaha Guud ee UNWTO wuxuu la kulmay Madaxweynaha Azerbaijan
Wararka Ururada • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Shirka Warka Warshadaha • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Xoghayaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO), Zurab Pololikashvili ayaa la kulmay Mudane Ilham Aliyev, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Azerbaijan iyagoo ka wada hadlay horumarinta waaxda dalxiiska ee dalka iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya Azerbaijan iyo UNWTO.
Arimaha soo socda ayaa looga hadlay intii uu socday kulanka: Sanad guuradii 10aad ee Geeddi-socodka Baku, koritaanka cajiibka ah ee imaatinka caalamiga ah ee Azerbaijan oo gaadhay heerkii ugu sarreeyay ee + 20% sanadkii 2017; taageerada UNWTO ee Azerbaijan ee hirgalinta mashaariicda maalgashiga, fududeynta fiisaha, siyaasada cirka furan, xoojinta iskaashiga golaha fulinta ee UNWTO iyo kaalmada UNWTO ee dalka ee dhinacyada hal abuurka iyo waxbarashada.
“Sanadkii 2017-kii, Azerbaijan waxay aragtay in dalxiisayaasha caalamiga ah ay korortay 20% cajiib ah. Kobacaani aadka u weyni waa natiijada siyaasadaha taageerada ee ku saabsan arrimaha sida fiisooyinka iyo maalgashiga, ballanqaadka dowladda iyo hoggaaminta. Waxaan ugu hambalyeeynayaa Azerbaijan guushan, taasoo aad uga sarreysa kororka celceliska adduunka ee sanadka 2017 oo ah 7% adduunka, waxaana rajeynayaa inaan xoojino iskaashigeenna adag ee awalba lahaa ”ayuu yiri Xoghayaha Guud.
Intii lagu guda jiray booqashadiisa rasmiga ah, Xoghayaha guud wuxuu sidoo kale la kulmay Mr Abulfas Garayev, Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Jamhuuriyadda Azerbaijan, si ay uga wada hadlaan guud ahaan fursadaha iskaashi UNWTO.
Maalmaha soo socda, Mr Pololikashvili wuxuu furi doonaa Carwada 17aad ee Caalamiga ah ee Dalxiiska iyo Dalxiiska Azerbaijan wuxuuna la hadli doonaa Jaamacadda Dalxiiska iyo Maareynta Azerbaijan (ATMU).